Fiarovan-tena :: Jiolahy maty notoherin’ny tompon-trano • AoRaha
Fiarovan-tena Jiolahy maty notoherin’ny tompon-trano
Namoy ny ainy, andro vitsivitsy taty aoriana, ny iray tamin’ireo mpanafika tany Antsampandrano, Antanifotsy, ny alin’ny zoma 26 marsa lasa teo. Ny ratra mafy nahazo azy nandritra ny fanoheran’ny tompon-trano no nitarika ny fahafatesan’io lehilahy io.
Ataon’ny zandary famotorana, amin’izao fotoana izao, ny namany dimy lahy sy ny sakaizany roa vavy.
Fantatra fa naratra mafy sy tsy mahatsiaro tena ny iray tamin’ireo jiolahy nanafika tany Antsampandrano ka manaraka fitsaboana tao amina hopitaly iray. Tao tokoa ny lehilahy izay nokarakarain’ ny vehivavy roa. Voamarina tamin’ny fakàna am-bavany an’iretsy farany fa nandritra ny fanafihana nataony no nahavoa an’io lehilahy maratra io.
“Ny fahafantaran’ny tompon- trano mialoha ny fandrobana mety hiseho no niomanany tamin’ny fanoherana an’ireo jiolahy. Ratra lalina no nihatra tamin’ny iray tamin’ ireo mpanafika. Tsy tana tamin’ny maraina teo (Naotin’ ny Fanoratana: omaly) ny ainy”, hoy ny fampitam-baovaon’ny zandary nanao ny fanadihadiana.
Taorian’ny vela-pandrika nataon’ny zandary hatrany no nahatrarana ny jiolahy roa hafa tao an-tranon’izy ireo, niaraka tamin’ny basy poleta iray sy basy vita tanana iray. Nalaina, taorian’izay ihany koa, ny namany telo lahy hafa.
Lozam-pifamoivoizana :: Rangahy 71 taona voafaokan’ny fiara
Fanenjehana Jiolahy :: Roa lahy lavon’ny bala teny amin’ ny araben’Ambodimita